अर्डेसा डे मनुएल विलास: यो के हो र लेखकले हामीलाई पुस्तकमा के भन्छन् वर्तमान साहित्य
सबैभन्दा धेरै कुरा गर्नको लागि दिइएको पुस्तकहरूमध्ये एउटा हो मैन्युएल विलास द्वारा अर्डेसा। यो यस्तो काम हो जसमा धेरैले उसको जीवनको अंश झल्काएको देख्छन् वा यो लेखक आफैंको आत्मकथा जस्तो पनि देखिन्छ। तर अर्डेसा अझ धेरै छ।
अर्को, हामी तपाईसँग पुस्तक, यसको लेखक र तपाईले लिनुपर्ने सबै कुराको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं कि यसलाई सकेसम्म चाँडो पढ्न शुरू गर्नुहोस्। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि अर्डेसा डे मनुएल भिलास के बारे हो?
1 मनुएल विलास को हो?
2 अर्डेसाको पुस्तक
2.1 अनि अर्डेसा केको बारेमा छ?
3 अर्डेसा डे मनुएल विलाको सार के हो?
4 अर्डेसा डे मनुएल भिलाबाट केहि अर्कहरू
मनुएल विलास को हो?
मानुएल विलास एक लेखक हुन् जो १ 1962 .२ मा ह्युस्कामा जन्मेका थिए। उनले हिस्पैनिक फिलोलोजी अध्ययन गरे र बीस बर्षसम्म उनी माध्यमिक विद्यालय शिक्षकको रूपमा कार्यरत थिए। यद्यपि लेख्ने आह्वानले गर्दा उनले साहित्यको पक्षमा आफ्नो जागिर छोडे। उनले कविताका साथै निबन्ध र उपन्यास पनि विकास गर्न शुरू गरे। वास्तवमा, अर्डेसा उसको पहिलो ठूलो सफलता होइन, यो २०० others मा ऐरे नुएस्ट्रो, वा २०१ Lou मा लू रेड युग एस्पाओल जस्ता अरू धेरैले पहिले गर्नु भन्दा पहिले हो।
यो पनि याद राख्नु पर्छ कि उनी २०१ 2019 मा प्लानेटि अवार्डका लागि फाइनलिस्ट थिए उनको काम "अभिभावक र बच्चाहरूबीचको सम्बन्धमा खुशी"।
लेखकको रूपमा, उनले स्पेनका सबै सबैभन्दा प्रसिद्ध मिडियामा सहयोग गरेका छन्। हामी एल मुन्डो वा एल हेराल्डो डे एरागेन (दुबै भोटेन्टो समूहबाट), ला भेang्गार्डिया, एल पेस, एबीसी ... को बारेमा कुरा गर्छौं रेडियोमा पनि उनीहरूले एउटा आला भेट्टाए र क्याडेना सेरको साथ सहकार्य गरेका छन्।
लेखक आफैंका अनुसार अर्डेसाले आफ्नी आमाको मृत्युपछि आकार लिन थाले जुन मे २०१ 2014 मा घटेको थियो। विलासका लागि यो वर्ष अत्यन्त नराम्रो थियो किनभने त्यस समयमा उनीसँग सम्बन्धविच्छेद पनि भएको थियो।
पुस्तक यो २०१f मा अल्फागुआ पब्लिशिंग हाउसमा बिक्रीमा गएको हो र सफल हुनको लागि सफल भयो। यसले १ 14 संस्करणहरू प्राप्त गर्‍यो, ती सबै एक बर्ष भन्दा कममा, जसले यसलाई एक लाख भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू बेच्न बाध्य तुल्यायो। एल् पास, ला भेang्गार्डिया, एल मुन्डो, एल कोरियो जस्ता विभिन्न मिडियाका लागि यो २०१ (को वर्षको पुस्तक हो ... र यो विदेशमा पनि गएको छ, किनकि अन्य धेरै देशहरूले यस कामलाई ध्यान दिएका थिए (संयुक्त राज्य, युनाइटेड किंगडम, इटाली, पोर्चुगल…)। यस पुस्तकका थुप्रै अनुवादहरू एक बर्ष पछि आए, जस्तै इटालियन वा पोर्तुगाली।
अनि अर्डेसा केको बारेमा छ?
यदि हामीले तपाईंलाई छिटो र ठोस जवाफ भने, हामी तपाइँलाई भन्दछौं कि अर्डेसा डे मनुएल भिलाले आमा बुबा र बच्चाहरू बिचको सम्बन्धसँग सम्बद्ध छ।
यो उपन्यास हो जुन लेखक आफैंको व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्पर्श हो र आज यो दुबै लेखक र सर्वसाधारण पढ्ने जनताका लागि सन्दर्भ पुस्तक हो।
धेरै अर्डेसाको बारेमा अन्य लेखकहरूले राय दिएका छन्। हामी केहि राम्रा ज्ञात शब्दहरु लाई हाइलाइट गर्न सक्छौं:
"सब भन्दा मानवीय, गहिरो, सबैभन्दा सान्त्वनादायी पुस्तकहरू मध्ये एक जुन मैले लामो समयदेखि पढेको छु।"
«यो एल्बम, अभिलेख, झूट वा जीवनको सान्त्वना बिनाको स्मृति हो, एक समयको, परिवारको, धेरै वर्ग र सानो फलको लागि निन्दा गरिएको सामाजिक वर्गको। […] यी चीजहरू गणना गर्न यसले धेरै शुद्धता लिन्छ, यसले एसिड लिन्छ, तीखो चक्कु, सही पिन जुन व्यर्थको ग्लोबलाई छिद्रण गर्दछ। अन्तमा बाँकी रहेको कुरा भनेको सत्यको सफा भावना र हराएको सबैको शोक हो। "
एन्टोनियो मुओज मोलिना
धेरैका लागि, ओर्डेसा मरणोत्तर पत्र जस्तै हो जुन मानुएल वीलाले आफ्ना अभिभावकलाई लेखेका थिए। छोटो अध्यायहरूमा जुन हामी एक अर्कामा गाँसिएका हुन्छौं, हामी एउटा असहाय र उखेलिएको चरित्रको कथा सिक्छौं जसले बाँच्नको लागि सबैभन्दा राम्रो हुने कोसिस गर्छ, जसले "सानो र नगण्य" देखिन्छ र वास्तवमै बढी महत्त्वपूर्ण भएको कुरालाई महसुस गर्छ। ।
यो साधारण भाषामा लेखिएको छ तर सोही समयमा गाह्रो, र त्यहाँ केहि अंशहरू छन् जुन बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ वा लेखक आफैले कुन कुरालाई स .्केत गर्दैछ भनेर ठ्याक्कै जान्न पनि गाह्रो छ। उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ, विशेष गरी कवितामा, तर धेरै चोटि उसले उपेक्षाका लागि यी स्रोतहरू प्रयोग गरेको पाप गर्दछ जसले पाठकलाई अलि गुमाउँछ।
कथाको बारेमा, त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि यसले हृदयबाट बोलेको छ किनकि यसले ऊ के बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा उदाoses्ग पार्छ, यद्यपि उहाँ पहिलो व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्न, बरु त्यस्तै चरित्रको साथ जसले केवल आफ्नो विगतलाई मात्र होइन वर्तमानलाई पनि बताउनुहुन्छ। पाठकको आफ्नो जीवनको दृष्टिकोण छ। ध्यानमा राख्दै कि कसैको जीवन बताउनेहरू धेरै फेसनल हुन्छन्, यो पुस्तक हो जुन तपाईंलाई मनपर्न सक्छ यदि तपाईंलाई त्यो साहित्यिक विधा मनपर्‍यो भने।
अर्डेसा डे मनुएल विलाको सार के हो?
अर्डेसा डे मनुएल भिल्लाको सार हो केहि मौलिक र निश्चित रूपमा तपाईले उपन्यासबाट अपेक्षा गर्नुहुने भन्दा बिभिन्न भिन्न। र यो तेस्रो व्यक्तिमा लेखिएको छ र पुस्तकले बोक्ने सही सन्देश प्रकट गर्दैन, तर बढी अस्पष्ट छ। हुनसक्छ त्यसकारण यो ध्यान आकर्षण गर्दछ।
आँसुले भरिएको, र सँधै भावनाबाट लेखिएको यो पुस्तक हालका दशकहरूमा स्पेनको घनिष्ट इतिहास हो, तर सबै कुराको कथन पनि जसले हामीलाई सम्झाउँछ कि हामी कमजोर मानिस हौं, उठेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा। सम्भव बनाएको जस्तो देखिन्छ, जब हामीलाई अरूसँग बाँध्ने प्रायः सबै सम्बन्धहरू हराइसकेका वा बिग्रेका छन्। र हामी बाँच्दछौं।
अर्डेसा डे मनुएल भिलाबाट केहि अर्कहरू
मार्फत अनियमित घर, तपाईंको पुस्तक स्रोत dossier मा, हामीसँग अर्डेसाको पहिलो दृष्टिकोण पुस्तकबाट केही अर्कहरू। हामी त्यसलाई तल छोड्दछौं ताकि तपाईं यसलाई पढ्नको लागि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
र मैले यो पुस्तक लेख्न सुरू गरें। मैले सोचेँ कि मेरो आत्माको अवस्था उत्तरी स्पेनको एउटा ठाउँ हो जुन पहाडले भरिएको ठाउँ अर्देसा भन्ने ठाउँमा भयो र यो पहेंलो स्मृति हो, पहेंलो र Ord्गले अर्डेसाको नाममा आक्रमण गर्‍यो र अर्डेसा पछि मेरो बुवाको व्यक्तित्व १ 1969 XNUMX of को गर्मीमा कोरियो। »
Life जब जीवनले तपाईलाई खुशीको साथ आतंकको विवाह देखाउँदछ, तपाई पूर्तिको लागि तयार हुनुहुन्छ। आतंकले संसारको शव देखिरहेको छ।
"मेरी आमा अराजक कथाकार थियो। म पनि। मेरो आमाबाट म कथा अराजकता विरासत मा प्राप्त। मैले यसलाई कुनै पनि साहित्यिक परम्परा, शास्त्रीय वा अवान्त-गार्डेबाट अधिकार गरेन "।
“हरेक मादक पदार्थ त्यो क्षणमा आउँछ जब उसले पिउने र बाँच्नको बीचमा छनौट गर्नै पर्छ। एक प्रकारको हिज्जे विकल्प: कि त तपाईं घेरा वा uves राख्नु हुन्छ। […] जो धेरै पिउँछ उसले जान्दछ कि रक्सी भनेको एक उपकरण हो जसले संसारको लक तोड्दछ। "
«म लेख्छु किनकि पुजारीहरूले मलाई लेख्न सिकाएका थिए। सात सय मिलियन बराबर। यो स्पेनमा गरिबहरूको जीवनको ठूलो विडम्बना हो: म स्पेनिश समाजवादी वर्कर्स पार्टीको भन्दा पुजारीहरूको बढी .णी छु। स्पेनको विडम्बना जहिले पनि कलाको काम हुन्छ। "
Spain मलाई स्पेनले मेरा आमाबाबुलाई के गरेको मन पर्दैन, न त त्यसले मलाई के गरिरहेछ। मेरा अभिभावकको अलगावको बिरूद्ध म अब केहि गर्न सक्दिन, यो अपत्यारणीय छ। म केवल यो मात्र मेरो लागि साकार गर्न सक्दिन, तर यो लगभग सत्यमा आएको छ "।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » अर्डेसा डे मनुएल विलास
अन्धकार र बिहान